साउदीबाट आएको नेपाली छोराको भिडियोले सबै स्तब्ध, थामिदैनन् आँशु ! – Points Nepal
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०७, २०७८ समय: १३:१९:३३
काठमाडौ : साउदी अरबबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आएको एउटा भिडियोले दुनियाँलाई नै स्तब्ध बनाएको छ ।
दुई बर्ष अघि न्यू वल्ड ओभरसिज प्रा.लि. चापागाउँ ललितपुरबाट रोजगारीका लागि साउदी पुगेका एक
नेपालीको अवस्था उक्त भिडियोमा देखिएको छ । भिडियो देख्दा जो कोहीको आँखाबाट आँशु रोकिन्न । साउदीको जे’द्धामा एउट कोठामा उनी छटप’टाइरहेका हुन्छन् । लावाङ्ग लामाले भिडियो फेसबुकमा लाईभ गर्छन् ।
भिडियोमा भनिरहेको सुन्न सकिन्छ अहिले म साउदीको जे’द्धामा छु । यहाँ नेपालको गाउँभन्दापनि कहा’लीलाग्दो अवस्था छ । न बत्ति छ न त एसी नै । पिउने पानीपनि पाइएको छैन । उनको भिडियोमा देख्न सकिन्छ एक नेपाली छोरा पेट थि’चेर छटप’टाइरहेका हुन्छन् ।
भिडियो हेर्दा उनलाई असा’ध्यै पि’डा भएको छ । उनी भूइमा छटप’टाइरहेका हुन्छन् । भिडियो खिचि’रहेकाले यी साथी १८ महिनादेखि बि’रामी परेको र आज निक्कै सा’ह्रो परेको भनिरहेका छन् ।
Saudi In Nepali
केही साथ सहयोग गर्यो वा छोएर पक्रि’एर पि’डामा साथ दियो र पछि घट’ना भयो भने आफै फस्ने कानून भएकाले आफूहरु छुन नसकिरहेको भन्छन् । उनी पानी–पानी भन्दै छटप’टाइरहेका हुन्छन् । भिडियो खिच्ने साथी के गर्नु आँशु बगिरहेको छ यो पिडा हेर्दा तर छोयो भने आफै परिन्छ ।
उनले भिडियोमा आयुश भाई भनिरहेका हुन्छन् । न्यू वल्ड ओभरसिज् को प्रमुख तिलक काभ्रे हो भनेका छन् । कम्पनीले गु’हार माग्दा उल्टै बक्ति बन्द गरिदिएको छ । हाम्रो वि’जोग छ भनिरहेका हुन्छन् ।
यहाँको कानून यही छ । यहाँ आएपछि कम्पनीले तलबपनि दिएको छैन । नेपालपनि पठाउँदैन । कम्पनीले कुनै कागजात दिएको छैन । अस्प’ताल लिएर गएपनि कम्पनीले कुनै कागज नदिएका कारण भर्ना गर्दैन ।
बाहिर बाटोमा फ्या’ल्नपनि सकिन्न । के गरौँ । यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर नेपालका सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पु¥र्याईदिनु भन्दै उनले आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ अरु दुई जनापनि देखिन्छन् । अब चै पुलिसलाई फोन गरौँ है । गैर कानूनी भएको कारबाही खेपेपनि खेपौँ ।
मेरे सबै एकसाथ म’रिएला भन्ने सल्लाह गरिरहेका हुन्छन् । त्यसपछि भिडियो सकिन्छ । भिडियो ६ मिनेट ५५ सेकेण्डको छ । भिडियोमा उक्त व्यक्ति को हुन् भन्ने भनिएको छैन । तर यो नेपालीको एक पि’डा जो कोहीले देख्न सकिन्न । यो भिडियो र सामाग्री सम्बन्धित निकायमा पु¥र्याएर उनको उ’द्धार र उपचारमा सबै नेपाली हातेमालो गरौँ ।
Last Updated on: January 21st, 2022 at 1:19 pm